Shiinaha Blue Spirulina (Phycocyanin) 2.11oz/60g soo -saareyaasha iyo alaab -qeybiyeyaasha | Boqor Dnarmsa
Waxaad yeelan doontaa 3 wiqiyadood oo buuxa si aad u tijaabiso wax yarna meel dheer bay maraysaa.
Canjeero Mama Smurf
Soo qaado isku darka canjeelada aad jeceshahay oo ku dar 2 qaado oo ah Pure Bulk Organics spirulina buluug halkii koob ee isku dhafka qallalan oo si fiican isku walaaq. Waxaad samayn doontaa canjeelo buluug madadaalo leh oo ay ku dhufteen carruurta da 'walba leh. Isku hagaaji cadadka budada spirulina ee buluugga ah ee aad isticmaashid iyada oo ku saleysan midabka la doonayo. .
Baraf, 1 koob oo caano lows ah, 2 moos ah, 2 qaado oo yogurt cad ah, shaaha vaniljka, 2 qaado oo ah spirulina buluug, macaan, isku dar kadibna isku qurxin miro cusub oo u adeeg.
Shakerka ku dar baraf, 2 xabbo oo gin ah ama vodka, 2 darbo oo vermouth ah, ½ qaado oo ah budada spirulina ee buluugga ah. Si xoog leh u rux oo ku cadaadi dhalada dheer ee martini ama barafka.
3 wiqiyadood oo buuxa oo ah budada spirulina buluug dabiici ah & * 100% qanacsanaanta ama dammaanadda lacagtaada.
Phycocyanin waa nafaqo dabiici ah oo naadir ah oo kaliya ku jirta cyanobacteria. Waxyaabaha ay ka kooban tahay: midabka cyanobacteria. Astaamaha: budo buluug ah. Waxay ku milmi kartaa biyaha laakiin kuma milmi karto aalkolada iyo dufanka.
Phycocyanin waa mid ka mid ah borotiinnada midabka dhif ah ee dabeecadda, ma aha oo kaliya midab dhalaalaya, laakiin sidoo kale borotiin hodan ku ah nafaqada. Halabuurka aashitada amino -ka ayaa dhammaystiran oo waxyaabaha amino acid ee loo baahan yahay ayaa sarreeya. Bilowgii qarnigii 21-aad, phycocyanin waxaa si weyn loogu isticmaalaa cunnada iyo isku-qurxinta midabka dabiiciga ah oo heer sare ah waxaana laga sameeyay dawooyinka biochemical-ka ee Yurub iyo Mareykanka, Japan iyo dalal kale.
Maadaama aan ku jirno ganacsiga cuntada aadka u sarreeya badeecad aad u nafaqo badan oo caafimaad leh ayaa ku habboon luuqdeenna. Laakiin waxa aan ogaannay ayaa ah in macaamiisheenna badani ay jecel yihiin spirulina -ta buluugga ah ee midabada quruxda badan iyo pizzazz ee ay ku darsato cuntada, cabbitaanka iyo macaanka. Laga soo bilaabo canjeelada mama smurf oo madadaalo leh ilaa spirulina martini waxaa jira waxyaabo badan oo hal abuur leh oo aan aragnay dad ku samaynaya budadan sixirka ah.
Hore: Kiniiniyada Chlorella Dabiiciga ah ee ODM ee OEM ODM 500mg 1000mg iwm.
Xiga: Kiniiniyada Spirulina 500mg